Tag: olu over | Martech Zone
Tag: olu obula
BunnyStudio: Chọta Onye Ọrụ Voice-over Talent ma mepụta Audio Audio gị ọsọ ọsọ na ngwa ngwa
Amaghị m ihe kpatara na onye ọ bụla ga-agbanye igwe okwu laptọọpụ ha wee rụọ ọrụ dị egwu na-ekwupụta vidiyo vidiyo ma ọ bụ egwu egwu maka azụmahịa ha. Gbakwunye ọkachamara ọkachamara na ụda olu adịghị ọnụ, ọ dị mfe ma talent ndị dị ebe ahụ dị ịtụnanya. BunnyStudio Mgbe enwere ike ịnwa gị ịga chọọ onye ọrụ ọ bụla na ndekọ aha ọ bụla, BunnyStudio na-elekwasị anya na ụlọ ọrụ ndị chọrọ enyemaka ọdịyo ọkachamara na mgbasa ozi ọdịyo ha, pọdkastị,
Animaker: Do-It-Yourself Animation Studio, Marketing Video Editor, na Video Ad Builder
Ihe nkiri na vidiyo dị ndụ dị mkpa maka ọgbakọ ọ bụla. Vidio dị oke egwu, nwee ikike ịkọwa echiche siri ike n'ụzọ doro anya ma nyekwa ahụmịhe nke ọhụụ na nke a na-anụ. Ọ bụ ezie na vidiyo bụ usoro dị egwu, ọ na-enweghị ike ịkwụsị maka obere azụmaahịa ma ọ bụ ndị ahịa n'ihi akụrụngwa achọrọ: Vidio ọkachamara na akụrụngwa maka ndekọ. Ndị ọkachamara n'olu maka akwụkwọ edemede gị. Ndị ọkachamara na eserese na mmemme iji webata. Na, ma eleghị anya, nke kasị dị oké ọnụ na
Ihe Ntuziaka 5 Mgbe ing Na-ahọpụta Voice Gị n’elu Talent maka Mmetụta Kachasị Elu
Anyị emeela mmekọrịta dị ukwuu site na ọtụtụ ikike olu olu karịa afọ. Amanda Fellows bụ otu n'ime talent anyị goto, yana Paul na Joyce Poteet. Ma ọ bụ vidiyo na-akọwa nkọwa zuru ezu ma ọ bụ nkwanye Podcast, anyị maara na ịchọta olu ziri ezi karịa talent enweela mmetụta pụrụ iche na ogo mmepụta anyị. Dị ka ihe atụ, Pọl na obodo Indianapolis bụkwa otu ihe. Ọ nọ na redio, telivishọn, ma bụrụ olu olu maka ya
Wednesday, October 28, 2015 Wednesday, October 28, 2015 Jason McCoy kwuru
Mgbe ị na-achọ ịrụ ọrụ na olu onye na-ese ihe maka izipu ozi gị, vidiyo onye na-akọwa ya, azụmahịa ma ọ bụ ihe ọ bụla chọrọ onye na-akọ akụkọ nwere ahụmahụ, ọ dị mkpa ịhọrọ onye nwere ezigbo ikike maka mkpa gị. Ikwu okwu nke ọma abụghị nanị onye na-ekwu okwu ụfọdụ mgbe a sị kwuwe, ị pụrụ ime nke ahụ n'onwe gị! Iji olu nwere nka mara nka karia omenka di nkpa maka izisa ozi gi n’ime